Ny mpanankarena ihany ve no afaka manao fety any aoriana?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny mpanankarena ihany ve no afaka manao fety any aoriana?
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Matihanina 1000 eo ho eo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no nanontaniana momba ny fiantraikan'ny fisondrotan'ny vidin'ny vidim-piainana vokatry ny areti-mifindra amin'ny tsena ankapobeny.
Ny matihanina amin'ny indostria dia saika misaraka amin'ny hoe ny mpanankarena ihany no afaka manao fialantsasatra amin'ny ho avy, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London, hetsika manerantany ho an'ny indostrian'ny dia.
Matihanina 1000 eo ho eo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no nanontaniana momba ny fiantraikan'ny fisondrotan'ny vidin'ny vidim-piainana vokatry ny areti-mifindra amin'ny tsena ankapobeny. Maherin'ny antsasany (51%) no niahiahy fa ho lasa fitehirizan'ny mpanankarena ny dia, ary 49% no tsy manaiky.
Nanontany ihany koa ny tatitry ny indostrian'ny WTM momba ny halehiben'ny fisondrotana, miaraka amin'ny valim-pikarohana manamafy fa ny vidin'ny vidiny dia tokony hiakatra amin'ny 2022. Maherin'ny iray amin'ny telo (35%) amin'ny santionany no nilaza fa mety hiakatra ny vidiny. eo anelanelan'ny 1% sy 20% raha oharina amin'ny taona ankehitriny. Na izany aza, ny fanerena mafy amin'ny vidiny sy ny filàna famerenana ny vola very nandritra ny areti-mifindra dia midika fa mihoatra ny iray amin'ny folo (12%) no manantena ny hametraka ny vidiny mihoatra ny 20%.
Amin'ny lafiny iray, ny sasany dia manantena ny hidina amin'ny vidin'ny 15% maminavina ny fihenan'ny tsotsotra eo anelanelan'ny 1% sy 20%, raha 9% kosa no nilaza fa hidina be ny vidin'ny orinasany, mihoatra ny 20%.
Manodidina ny ampahadimy (22%) no manantena ny hitovy amin'ny vidiny.
Fantatry ny mpanjifa UK ihany koa fa ny fiantraikan'ny COVID-19 sy ny Brexit amin'ny vidiny dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny fitsangatsanganana, ka ny 70% no manaiky fa mampanahy ny ho avy izany.
Simon Press, WTM London, Talen'ny Fampirantiana, dia nilaza hoe: "Tany UK, ny totalin'ny saran'ny fitsangatsanganana any ivelany amin'ny fahavaratra dia nivadika tamin'ny tsy maintsy nandoavana ny fitsapana, fa ny fangatahana fijanonana dia nitarika ny tsy fahampiana sy ny fiakaran'ny vidiny. Ireo fanerena manokana ireo dia mety mbola azo ampiharina amin'ny taona ho avy, fa ny vokatra azo avy amin'ny indostria dia tsy azo lavina - hiakatra ny vidiny amin'ny 2022.
“Sehatra maro amin'ny fitsangatsanganana no nanetsika ny hafatra ho an'ny mpanjifa mankany amin'ny 'sarobidy' fa tsy ny 'vidiny'. Ny fanamby ho an'ny indostria dia ny hahazoana antoka fa afaka manome vokatra sy traikefa izy ireo izay manamarina ny fisondrotry ny vidiny ho an'ny mpandeha ary mitazona ny sisiny, saingy tsy misy vidiny amin'ny tsena. "